अरुण तेश्रो मोदीलाई सुम्पिएको भन्दै आइतवार नेपाल बन्द, के-के भयो अरुण तेश्रोमा राष्ट्रघाता ? — Motivate News
अरुण तेश्रो मोदीलाई सुम्पिएको भन्दै आइतवार नेपाल बन्द, के-के भयो अरुण तेश्रोमा राष्ट्रघाता ?
काठमाडौ – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आइतबार (भोली) नेपाल बन्दको आह्वान गरेको छ । पार्टीका महासचिव विप्लवले शनिबार बिहान एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै नेपाल बन्दको आह्वान गरेका हुन् ।
विज्ञप्तीमा सबै देशभक्त, राष्ट्रवादी, जनवादी र वामपन्थीहरुलाई सहयोग, समर्थन र ऐक्यबद्धताको लागि अनुरोध गरिएको छ । राष्ट्रघातको पछिल्लो शृंखलाको रुपमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण, उक्त भ्रमणका क्रममा केपी र मोदीले संयुक्त रुपमा गरेको राष्ट्रघाती अरुण–३ को शिलन्यास, मोदीको सिधै जनकपुर आगमन र त्यहाँ गरिएको कथित नागरिक अभिनन्दन, संवेदनसिल र रणनैतिक महत्वको उनको मुस्ताङ भ्रमण, मोदीको भ्रमणको सुरक्षाका नाममा भारतीय सेनाको नेपाल प्रवेश, हतियार र अत्याधुनिक सैन्य हेलिकप्टर, जहाजको अवतरण, नेपाली सुरक्षा शक्तिलाई मनोवैज्ञानिक रुपमा पार्न खोजिएको हिनताबोधले पुनः नयाँ आयाममा भएको गम्भीर राष्ट्रघात पटाक्षेप हो’ विप्लवद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
जनताको स्तर र केही संघ संगठनहरुले गरेका यस्तो प्रतिवाद र प्रतिरोधको हाम्रो पार्टी सम्मान र समर्थन गर्दछ, महासचिव विप्लवको विप्लवको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
के-के भयो राष्ट्रघाता ?
दुई दिने नेपाल भ्रमणमा आएका भारतिय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अनौठो चाल चालेका छन । प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओली लगायत सम्पूर्ण नेपालीलाई झुक्क्याए भारतिय प्रधानमन्त्री मोदीले अरुण तेश्रोमा बाजि मारेका छन । विगत लामो समयदेखि नेपालको पानीमा आँखा गाड्दै आएको भारतले पछिल्लो समय केपि ओलीलाई फकाएर आफू अनुकुल सम्झौता गराउन सफल भएको छ ।
मोदी ओलीले शुक्रबार संयूक्त रुपमा अरुण तेश्रोको सिलान्यास गरेर ठुलो भुल गरेका छन । अरुण ३ ले नेपाल र नेपालीलाई डुवाएको छ । ९०० मेघावाट मध्ये प्रति मेघावाट रु ५० लाखले जम्मा १९७ मेघावाट मात्र नेपालले किन्न पाउने भएको छ । बाँकी ७०३ मेघावाट सतलज (भारतीय कम्पनी)ले जसलाई जति मूल्यमा पनि बेच्न पाउने सम्झौतामा उल्लेख छ । नेपाल सरकारले सतलजलाई १० बर्ष सम्म सत प्रतिशत आयकर छुट दिनेछ भने ५ बर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालले उक्त आयोजनाबाट सतलजले कति कमायो त्यसको खोजिनिति गर्न पाउने छैन । परियोजना सम्पन्न गर्नका लागि भारतबाट कामदार र समान ल्याउने उल्लेख छ भने कथम कदाचित उक्त आयोजनामा हडताल र बन्द भयो भने नेपाल सरकारले सतलजलाई क्षेतिपूर्ति दिनुपर्ने छ । यो सम्झौता ५ बर्ष भित्र बनाइसक्नुपर्ने छ भने २५ बर्ष भारतले प्रयोग गर्न पाउने छ । यसरी हेर्दा आलीले मोदीलाई ३० बर्षसम्मका लागि भारतलाई सुम्पिएका छन ।
Posted in अर्थ/रोजगार, मुख्य समाचार, समाचार | Tagged biplap, kp oli, Narendra modi, netrabikram chand | Leaveareply